Bravo: sary an-tserasera ny horonan-tsary momba ny horonantsary | Martech Zone
Alakamisy, Aprily 26, 2012 Alahady, Septambra 8, 2013 Douglas Karr
Tranonkala maro no mahazo tombony amin'ny fijoroana vavolombelona an-tsary na mametraka pejy ahafahan'ny mpanjifa manoratra hafatra an-tsary ho an'ny orinasa. Na izany aza, fanaintainana, fakana sary ary fampiantranoana ireo horonan-tsary ireo dia mety ho fanaintainana tokoa. Bravo manantena ny hanova izany amin'ny serivisiny vaovao, mamela ny mpanjifanao hanoratra amin'ny alàlan'ny webcam-dry zareo ary hampiantrano azy amin'ny pejy fanjakàna natokana ho anao!
Ity misy topy maso amin'ny serivisy:
Ity ny serivisy nofaritan'ny tranonkala Bravo:
Izahay dia mamorona ny pejin-tsoratry ny video anao - Ny horonan-tsarimihetsika Video-friendly anay dia manasongadina ny marikao ary mampahafantatra ny mpihaino izay tianao holazain'izy ireo.
Ny mpihaino anao dia manoratra ny horonantsary 30 segondra - Ny mpanjifanao na ny vinavinanao dia afaka manoratra avy hatrany ny hafany, hevitra na fanontaniany ao anatin'ny segondra amin'ny alàlan'ny webcam-dry zareo.
Jereo sy zarao na aiza na aiza amin'ny Internet ny horonan-tsarinao - Aparitaho amin'ny tranokalanao na amin'ny alàlan'ny media sosialy. Bravo dia mamela anao manomboka amin'ny maha-olona ny tranonkalanao, 30 segondra indray mandeha.
Tags: fijoroana ho vavolombelona momba ny mpanjifaproduct reviewshoronantsary novokarin'ny mpampiasa
May 1, 2012 amin'ny 4: 36 AM
Lahatsoratra mahasoa toy izany
May 7, 2012 ao amin'ny 8: 29 PM
Toa mihafana ny fifaninanana amin'ny fijoroana vavolombelona momba ny vidin'ny mpanjifa. Nahazo naoty avy amin'ny serivisy vaovao, antsoina hoe Crowdrave izay manolotra serivisy mitovy amin'izany aho.